ဇေယျဝတီ အလင်းအိပ်မက်: လယ်တီ(၇)ရက် ဘုရားရှိခိုး(၅)
ဇေယျဝတီမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်း၊ ပန်တိုင်းရမစ်၊ မလေးရှားနိုင်ငံ (Zeyawati Myanmar Buddhist Temple, Pantai Remis, Malaysia)
12 jln kg china, pantai remis, 34900 Ipoh, Perak, malaysia
ဗွီဒီယို ( ၃ ) (1)
ဆောင်းပါး. ဓာတ်ပုံ (3)
၅။ ဘုရားဖြစ်ခါ၊ မိဂဒါသို့၊ စကြာရွှေဖွား၊ ဖြန့်ချီသွား၍၊ ငါးပါးဝဂ္ဂီ၊ စုံအညီနှင့်၊ မဟီတစ်သောင်း၊ တိုက်အပေါင်းမှ်၊ ခညောင်းကပ်လာ၊ နတ်,ဗြဟ္မာအား၊ ဝါဆိုလပြည့်၊ စနေနေ့ဝယ်၊ ကြွေ့ကြွေ့လျှံတက်၊ ဓမ္မစက်ကို၊ မိန့်မြွက်ထွေပြား၊ ဟောဖော်ကြားသည်။ တရားနတ်စည် ရွမ်းတယ်ကို။
မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးနောက် ကာမဂုဏ်၌ မွေ့လျော်သော ဤသတ္တ၀ါများကို တရားဟောသော် တရားကိုလွယ်ကူစွာ နားလည်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ကုန်။ တရားဟောလျှင် ပင်ပန်းရုံသာဖြစ်မည်ဟု အကြံဖြစ်လာ၏။ သဟမ္မတိဗြဟ္မာကြီးတောင်းပန်ချက်အရ တရားဟောရန်သင့်မည် ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကြည့်လတ်သော် ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးရှိရာ မိဂဒါဝုန်တောသို့ ၀င်ပြီးနောက် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ခုနှစ်၊ ၀ါဆိုလပြည် စနေနေ့ ညချမ်းနေမင်းလည်းဝင်လုဆဲ လမင်းလည်းထွက်ပေါ်လုဆဲဆဲတွင် “ဒွေ မေ ဘိက္ခဝေ”အစချီသော တရားဦးဓမ္မစကြာကို ဟောတော်မူ၏။
လာရောက်အားပေးကြသော သူအပေါင်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာကြပါစေံ
ဆီမီးထွန်းပွဲ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများ
သတင်းဌာန DVBသတင်း1 VOAသတင်း ဦးဥာဏိဿရ တရားတော် တရားတော်များ ဘီဘီစီမြန်မာ ရိုးမ-၃ သီရိလင်္ကာရောက်မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်များ အရှင်မေတ္တာစာရ အလင်းတန်း ဧရာဝတီ ခေတ်ပြိုင်သတင်း မြန်မာသတင်းများ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ထာဝရသူငယ်ချင်းဘလော ထိုင်းကျောင်းသားရဟန်းတော်များ
Between the Sakyan and the Koliyan Kingdoms
War is diametrically opposed to peace. Conflict is due to the various malignant motives stagnating in the minds of men. The control of such thoughts as greed, jealousy, hate and so on will certainly lead to peace.
- Type your summary here.Type the rest of your post here.
2009 All Rights Reserved ဇေယျဝတီ အလင်းအိပ်မက်.